Booqashada iyo khubarada maxalliga ah waxay baarayaan khadadka tayo sare leh ee fosfooraska tayo sare leh ee duurka ku yaal Saldhigga Cilmi baarista ee Sussundenga ee ku yaal bartamaha Mozambique. Deynta sawirka: Guilherme Cheiro
Ku Dhaqanka Mustaqbalka ee Wadajir Cilmi Baarista Beeraha
Waxaan ku faraxsanahay inaan wadaagno bilowga dib u cusboonaysiinta cusub CCRP.org! Iyada oo loo marayo goobta, waxaan ku bixinnaa xiriir ku saabsan in ka badan 80 mashruuc oo cilmi-baaris ah, barashada ku saabsan barnaamijka oo dhan, iyo xiriiro lala yeesho kuwa kale ee ku hawlan abuurista xalalka dabiiciga ah iyada oo loo marayo cilmi-baaris cusub ee cilmiga dhirta.
In kabadan seddex sano kahor, Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay sameysay balanqaad ah inay wax ka qabato gaajada aduunka iyadoo la dejinayo barnaamij cilmi baaris dhanka beeraha ah oo diirada saaraya cilmiga dhirta. Walaac muhiim ah ayaa markaa ahaa in la yareeyo gaajada iyada oo la dhageysanayo joogtaynta deegaanka. Barnaamijkaasi wuxuu u rogay Barnaamijka Cilmi-baarista Dalagyada Dalagga ee maanta, kaas oo diiradda lagu saarayo taageeridda cilmi-baarista beero-baarista 10 waddan oo ku yaal Afrika iyo Koonfurta Ameerika.
Angela Mkindi oo ah ardayaga ardayda MSc ayaa isu diyaarinaysa inay ku buufiso sunta sunta dabiiciga ah looga helo dhul ku yaal Lyamungo, Tanzania. Dhibcaha sawir: Angela Mkindi
Sanadkii 1982, markii la aasaasay Barnaamijka Baaritaanka Dalagyada Wadashaqeynta-pre-intarnetka — dadka adduunka oo dhan waxay ku wada xiriiraan warqad waraaqeed, taleefan dheerna wicitaanku wuxuu qaataa lix doolar daqiiqaddii. Maanta, 37 sano ka dib, si dhakhso leh ayaan dunida ugula xidhiidhi karnaa isgaarsiinta dijitaalka ah. Marka la eego waxa hadda suurtagal ah, waxaan go'aansannay inaan maal gashanno dib-u-cusboonaysiinta barta internetka ee ccrp.org si dhakhso badan oo hufanna loogu gudbiyo fikradaheena iyo himilooyinkeena. Waxaa ka mid ah astaamaha boggeena cusub, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad iska hubiso:
annaga Maktabadda Khayraadka, aruurinta daabacaado aad loo raadin karo, fiidiyooyin, maqaallo, sheekooyin, iyo noocyo kale oo ilo ah oo ka soo baxay maalgashiga CCRP iyo iskaashiga
annaga Mashaariicda deeqda, Meel lagu cabudhinayo faylalkayaga kala geddisan ee mashruucyada cilmi-baarista beero-nafsiga. Halkaan waxaad ka baran kartaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan dadka, meelaha, iyo horumarka bulshada CCRP ee bulshooyinka tababbarka (CoPs).
annaga Wararka & Cusboonaysiinta, si aad u aragto dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee mashaariicda, gobollada, iyo barnaamijka
“Ujeedadeenu waa ugu dambeyntii abuurista adduun cusub oo awood u siineysa beeraleyda maxalliga ah in ay quudiyaan qoysaskooda iyo bulshooyinka si ay ugu anfacdo dhammaan bulsho ahaan, dhaqaale ahaan, iyo deegaan ahaanba.” - JANE MALAND CADY, DIRECT BARNAAMIJKA DALKA
Dabayaaqadii 1982, isku xirnaanta degdegga ah ayaa u ekaan lahayd khiyaali saynis. Hadda, markaan ka fikirno 30ka sano ee soo socota, waxaan qiyaasi karnaa seenyaalado ku saabsan wax ka qabashada gaajada adduunka iyo ilaalinta dhulkeenna.
Mid ka mid ah qorayaasha aan jeclahay, Adrienne Maree Brown, waxay u aragtaa khayaaliyinta sayniska inay tahay “hab lagu dhaqan geliyo mustaqbalka. sheekooyin cusub. Waa xaqeena iyo masuuliyadeena inaan abuurno adduun cusub. ”
Fikradda ah barashada mustaqbal wada-noolaanshaha iyo wada noolaashada sheekooyinka cusub waxay la jaanqaadeysaa shaqada aan ku taageerno hay'adda 'CCRP'. Hadafkayagu ugu dambeyntii waa abuurista adduunyo cusub - oo ay la socdaan beeralayda, saynisyahano, faa'iidooyinka aan maxalliga ahayn, fidinta, iyo macaamiisha — si awood loogu siiyo beeraleyda maxalliga ah inay quudiyaan qoysaskooda iyo bulshooyinka si ay ugu anfacdo dhammaan bulsho ahaan, dhaqaale ahaan, iyo deegaan ahaanba.
Ujeedada CCRP ee diiradda saareysa cilmi-baarista cilmiga beeraha waxay udub dhexaad u tahay isku-duwidda mustaqbalkan cusub oo deg deg ah. Warbixinno caalami ah oo dhowaan ka soo baxay xafiiska Qaramada Midoobay ee Isbedelka Cimilada (UNFCC), Gudiga Caalamiga ah ee Isbedelka Cimilada (IPCC), iyo Nidaam-siyaasadeedyeedka Sayniska-siyaasadeed ee Dawladda-ku-meel-gaarka ah iyo Adeegyada Deegaanka (IPBES) waxay si cad u faahfaahisay xaaladda degdegga ah ee wax looga qabanayo isbeddelka cimilada iyo lumista noolaha. Warbixinnadaas - iyo sidoo kale kuwa kaleba - waxay ku baaqayaan hab-dhaqanno hab-beereedyo cunto iyo cunto oo la socda beero-teknolojiyad. Qaar badani waxay sii wadaan inay farta ku fiiqaan cilmiga beero-fiolojiyadda oo ah furaha wax ku biirinta arrimaha badan ee wajahaya meeraha, laga bilaabo isbedelka cimilada, ilaalinta noolaha, iyo dib-u-nooleynta miyiga illaa nidaamyo dhaqaale oo caddaalad ah iyo shakhsiyaad firfircoon oo firfircoon. Ururo caalami ah oo caan ah sida Ururka Qaranka ee Cuntada iyo Beeraha (FAO) waxay qaadanayaan dadaal wax ku ool ah oo lagu cabirinayo cilmiga beeraha, iyo hay'adda 'McKnight Foundation' waxay si wada jir ah ula shaqeyneysaa dad badan safka hore ee hamiga iyo himilada aan horay loo arag.
Haweenka beeruhu waxay leeyihiin doorar badan. Doorka suuqgeynta ayaa muhiim u ah abuurista dakhliga qoyska. Deynta sawirka: Juan Arévalo
McKnight waa maal-ku-saleysan ku-saleysan oo leh a ballanqaad qoto dheer wax ka qabashada sinnaanta ee gobolka Minnesota, isbedelka cimilada ee Midwest, iyo nidaamyada cuntada ee qaybo ka mid ah Afrika iyo Koonfurta Ameerika. Sidaa darteed, McKnight wuxuu si qoto dheer uga fikiraa sida shaqada dhulka iyo beeruhu ugu xirnaan karaan kuwa kale ee maxalliga ah, gobol ahaan, qaran ahaan, iyo adduunkaba. Xiriirradaas ayaa qeyb ka ah barashada mustaqbal wadajir ah. Iyada oo loo marayo degelkeena cusub, waxaan hiigsaneynaa inaan soo bandhigno shaqsiyada iyo wadajirka dadaallada wada-hawlgalayaashayada cilmi-baarista, annagoo muujineynaa sida mawduucyada iyo barashada ay ugu xirmaan barnaamijka. Dadaalladani waxay saameyn ku leeyihiin wada-hadalada caalamiga ah iyo xulafada, iyagoo sameynaya ballanqaad wadajir ah oo ku aaddan abuuridda nidaamyada cunnada ee u wanagsan adduunka iyo dadka ku nool kuna nool.
Waxay noqon kartaa amar dheer, laakiin waa mid lama huraan ah. Maaddaama aan ka wada shaqeyno sidii aan u abuuri laheyn xalal cadaalad iyo bey'ad ahaaneed nidaamyadeena cuntada, CCRP.org waxay halkan u joogtaa inay gacan ka geysato ku celcelinta mustaqbalkaas wadajirka ah.
Qiimaynta Maqaalka Buluugga ah: Mabaadi'da iyo Qaab-dhismeedka, Waan ku Dhaafnaan karnaa Waxbarashada
By Claire Nicklin Noofambar 2019
Beakhayaasha Rajada: Dardargelinta Beddelka Nidaamyada Cuntada Joogtada ah
Warbixinta Ogast 2019